တရုတ် ကျူးကျော်မှုကို ကျွန်ုပ်တို့ ဘိုးဘွားများ တွန်းလှန် တိုက်ဖျက်ခဲ့ခြင်း - အပိုင်း (၁)	19 May, 13	သွေးစကား	- တိုက်ပွဲ	ရှေးခေတ် မြန်မာစစ်သူကြီး၏ ပုံပန်းချီကား
Last Updated ( Saturday, 04 May 2013 21:56 )
ပြည်ထဲရေး ဝန်ကြီးဌာနနှင့် လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့များ အသွင် ကူးပြောင်းရေး လုပ်ငန်း - အပိုင်း (၄)	17 May, 13	မူဝါဒ/ဥပဒေ	- တပ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ??????????????? ?????????? ??????? ??????????
Last Updated ( Friday, 05 April 2013 00:35 )
အင်ဒိုနီးရှား သမ္မတ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ယူဒိုယိုနို အနိုင် ရရှိခဲ့ခြင်း အကြောင်းရင်း (၅) ချက်	14 May, 13	မူဝါဒ/ဥပဒေ	- တပ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး စစ်တပ်အတွင်း ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ယူဒိုယိုနို
Last Updated ( Monday, 22 April 2013 15:06 )
လေကြောင်းရန် ကာကွယ်ရေး - အပိုင်း (၁၇) 12 May, 13	မူဝါဒ/ဥပဒေ	- သုသေတန	မြန်မာ့တပ်မတော်၏ ယာဉ်တင် လေကြောင်းရန် ကာကွယ်ရေး စက်အမြောက်ပုံ
Last Updated ( Thursday, 04 April 2013 15:41 )
ပြည်ထဲရေး ဝန်ကြီးဌာနနှင့် လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့များ အသွင် ကူးပြောင်းရေး လုပ်ငန်း - အပိုင်း (၃)	10 May, 13	မူဝါဒ/ဥပဒေ	- တပ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ????????????????? ???????????? Last Updated ( Friday, 05 April 2013 00:34 )
အာဆီယံ ခေါင်းဆောင်သူကြီး လုပ်ဖို့ ကြိုးစားဖွယ် ရှိလာတဲ့ အင်ဒိုနီးရှားနဲ့ ယူဒိုယိုနိုတို့ရဲ့ ခြေလှမ်း - အပိုင်း (၃)	07 May, 13	မူဝါဒ/ဥပဒေ	- တပ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ဘရူးနိုင်းနိုင်ငံမှ စစ်တပ်အရာရှိကြီး တစ်ဦးနဲ့အတူ ယူဒိုယိုနို
လေကြောင်းရန် ကာကွယ်ရေး - အပိုင်း (၁၆)	05 May, 13	မူဝါဒ/ဥပဒေ	- သုသေတန	မြန်မာ့တပ်မတော်၏ ယာဉ်တင် လေကြောင်းရန် ကာကွယ်ရေး စက်အမြောက်ပုံ
Last Updated ( Sunday, 05 May 2013 23:19 )
ပြည်ထဲရေး ဝန်ကြီးဌာနနှင့် လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့များ အသွင် ကူးပြောင်းရေး လုပ်ငန်း - အပိုင်း (၂)	03 May, 13	မူဝါဒ/ဥပဒေ	- တပ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ချက်သမ္မတနိုင်ငံ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန အဆောက်အဦး
Last Updated ( Saturday, 20 April 2013 00:05 )
အာဆီယံ ခေါင်းဆောင်သူကြီး လုပ်ဖို့ ကြိုးစားဖွယ် ရှိလာတဲ့ အင်ဒိုနီးရှားနဲ့ ယူဒိုယိုနိုတို့ရဲ့ ခြေလှမ်း - အပိုင်း (၂)	30 Apr, 13	မူဝါဒ/ဥပဒေ	- တပ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး အမေရိကန် သမ္မတ အိုဘားမားနဲ့အတူ ယူဒိုယိုနို
Last Updated ( Monday, 22 April 2013 15:05 )
အာဆီယံ ခေါင်းဆောင်သူကြီး လုပ်ဖို့ ကြိုးစားဖွယ် ရှိလာတဲ့ အင်ဒိုနီးရှားနဲ့ ယူဒိုယိုနိုတို့ရဲ့ ခြေလှမ်း - အပိုင်း (၁)
လေကြောင်းရန် ကာကွယ်ရေး - အပိုင်း (၁၄) ကမ္ဘာကြီးနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ အနာဂတ် - အပိုင်း (၅)
ကမ္ဘာကြီးနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ အနာဂတ် - အပိုင်း (၄)
လေကြောင်းရန် ကာကွယ်ရေး - အပိုင်း (၁၂)
Page 1 of 40	« Start Prev 1234567 8910 Next End »	ရှေ့တန်းလား နောက်တန်းလား မှုန်ဝါးဝါး ဖြစ်နေရတဲ့ တပ်မတော်သားများ
မိတ္ထီလာမြို့ အတွင်း သန့်ရှင်းရေး လုပ်ပေး ပြီးနောက် အနားယူ နေကြတဲ့ စစ်သည်ရဲဘော်များ
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဘာသာရေး အဓိကရုဏ်းများ ဖြစ်ပွားရာ ဒေသ များတွင် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် အင်အားနှင့် မလုံလောက်ရာ တပ်မတော်မှ ဝင်ရောက် ထိန်းသိမ်း နေရတဲ့အပိုင်း ဖြစ်နေပါတယ်။ အပြည့်အစုံသို့	ဂိတ်ကြေး ကောက်နေတဲ့ ရွှေကျင်မြို့က တပ်စခန်း
ရွှေကျင်မြို့အတွင်းရှိ ညောင်ဝိုင်း၊ တရုတ္တန်းရပ်မှ မူလတန်းကျောင်း ပတ်ဝန်းကျင် ရေလွှမ်းမိုးခဲ့စဉ်
မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီ အသွင် ကူးပြောင်းရေး ကာလမှာ ဂိတ်ကြေးများ ပေးနေရဆဲ ဖြစ်သလို ကုန်ပစ္စည်း ဈေးနှုန်းများ အဆမတန် မြင့်တက်နေရတဲ့ အကြောင်းမှာ... အပြည့်အစုံသို့	အပျော်လွန်ပြီး ဝန်ထမ်းနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့ ခိုက်ရန်ဖြစ်
Monday, 06 May 2013 00:16
ယခုနှစ် သင်္ကြန် ကာလတုန်းက ပဲခူးတိုင်း ရွှေကျင်မြို့နယ် အတွင်း KNU ငြိမ်းချမ်းရေး အဖွဲ့နဲ့ ရွှေကျင် ရေအား လျှပ်စစ်က ၀န်ထမ်း အချို့ အပျော်လွန်ပြီး ခိုက်ရန် ဖြစ်ပွားခဲ့ကြကြောင်း ရွှေကျင် မြို့ခံများ ထံမှ သိရှိရပါတယ်။ အပြည့်အစုံသို့	ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သမ္မတ ဖြစ်ခွင့် ဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေး ထိပ်ပိုင်း ခေါင်းဆောင်များ အကြား သဘောထား ကွဲလွဲခဲ့
မကြာသေးမီ ကလေးကမှ အစိုးရနဲ့ လွှတ်တော်ရှိ အနိုင်ရ ပါတီ USDP (ကြံ့ဖွံ့) ထိပ်ပိုင်း ခေါင်းဆောင်များ အကြားတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား သမ္မတ ဖြစ်ခွင့် ဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးအတွက် သဘောထား ကွဲလွဲ ခဲ့ကြောင်း စစ်ဖက် နီးစပ်သူများက သတင်း ပေးပို့လာပါတယ်။ အပြည့်အစုံသို့	မြန်မာ့စစ်တပ် အရာရှိများနှင့် အင်ဒိုစစ်တပ် အရာရှိကြီးတို့ မြန်မာ့အရေး ဆွေးနွေးခန်း - (၄)
(ဝဲ မှ ယာ) ၂၀၀၇ ခုနှစ်အတွင်း ရိုက်တာသတင်းဌာနမှ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ Indonesian Army Chief General Agustadi Sasongko Purnomo၊ Military Chief General Djoko Santoso နဲ့ Air Force commander Air Marshal Subandrio
အင်ဒိုနီးရှား ဗိုလ်ချုပ်ကြီးက စစ်တပ် အနေနဲ့ သဘောကောင်းပြီး ပြုပြင် ပြောင်းလဲရေးကို စတင် လုပ်မှာတော့ မဟုတ်ကြောင်း၊ အပြည့်အစုံသို့	စစ်တပ် ဆိုင်ရာ သတင်း၊ ဆောင်းပါး၊ အတွေ့အကြုံ၊ ဗဟုသုတ များအား [email protected] သို့ ဆက်သွယ် ပို့ပေးကြပါ။	လက်ရှိ www.photayokeking.org အား ၀င်လို့ မရပါက
http://photayokeking.blogspot.com သို့ ၀င်ရောက်ပေးကြပါရန်
ကြိုတင် အကြောင်းကြား ထားလိုပါတယ် ခင်ဗျား	Who's Online
We have 37 guests online	နောက်ဆုံးရသတင်းများ